There exists only one relief pillar in Srikshetra with sculptures of miniature stupas, Buddha images with different mudras (gestures) and attendants.
The relief was found while ploughing inaruin ofahillock site near the Pann-Tin village. The four sides of the relief pillar consist vertically of three levels of Buddha images, each with three images. At the upper level,astupa is sculpted between two Buddha images. At each level underneath the Buddha images are figurines of worshipping attendants andamonkey sculptured.
သရေခေတ္တရာရှိ ပြိုင်ဘက်ကင်းသော လက်ရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး မုဒြာဟန် မတူသော ဗုဒ္ဓပုံတော်များနှင့်စေတီငယ်များကို ထုဆစ်ထားပါသည်။
ပန်းတင်ရွာအနီးကုန်းငယ်တစ်ခုတွင် ယာထွန်ရာမှ တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ မျက်နှာပြင်လေးဘက်စလုံးကို အသုံးပြု၍ ထုလုပ်ထားပြီး မျက်နှာပြင်တိုင်းတွင် မုဒြာဟန်မတူသော ဗုဒ္ဓရုပ်ကြွပုံများကို အဆင့်(၃)ဆင့် ထုလုပ် ထားပါသည်။ အပေါ်ဆုံးအဆင့်များတွင် ဗုဒ္ဓရုပ်ကြွပုံတော်(၂)ဆူ၏ အလယ်၌ စေတီငယ်တစ်ဆူ ထုလုပ် ပုံဖော်ထားပါသည်။ ဗုဒ္ဓပုံတော်များ၏ ပလ္လင်အခြေတွင်လည်း ပူဇော် နေသော နတ်ဗြဟ္မာတို့သာမက မျောက်သတ္တဝါတစ်ကောင်၏ ပုံကိုပါ ထူးခြားစွာ ပုံဖော်ထားပါသည်။
Width 16.5 cm. Height 55 cm.
Srikshestra, Pyay Township, Bago Region
4th Century - 9th Century
The pillar was excavated at U Aung Thein’s farmland, near the Pann-Tin village, Htama-gauk tract, Pyay Township, in August 1999. It was transferred to the Srikshetra Archaeological Museum in September 1999.
Width ၁၆.၅ စင်တီမီတာ Height ၅၅ စင်တီမီတာ Length -
သရေခေတ္တရာ၊ ပြည်မြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ
အေဒီ (၄) ရာစုမှ (၉)ရာစုအတွင်း
၁၉၉၉-ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် ပြည်မြို့နယ်၊ ထမ္မကောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပန်းတင်ကျေးရွာအနီး၊ ဦးအောင်သိန်း ယာကွက်တွင်းမှ တူးဖော်ရရှိခဲ့ပြီး ၁၉၉၉-ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် သရေခေတ္တရာ ရှေးဟောင်းသုတေ သနပြတိုက်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါသည်။
သရေခေတ္တရာ ရှေးဟောင်းသုတေသနပြတိုက်၊ ပြည်
Srikshetra Archaeological MuseumAD 4th century ~ AD 9th century SculptureSandstoneUnknownSrikshestra, Pyay Township, Bago Region